Nolosha Finland > Qoyska > Waa maxey qoys? > Qoyska halka waalid leh
Qoysaska halka waalid leh waa wax ku badan Finland. Cunuggu wuxuu ku dhalan karaa guur la’aan ama waalidka ayaa isfuray.
Qoyska halka waalid leh, mid ka mid ah waalidiinta ayaa caruurta la degen lamaane la'aan. Markaas waalidku wuxuu noqon karaa mas’uulka cunugga ee kaliga ah ama wadajirka ah. Kuwa ilmaha wada jirka masuulka uga ah (yhteishuoltaja) waxay markale si wada jir ah labada waalid uga heshiinayaan arrimaha la xiriira caruurta.
Mas’uulnimada wadajirka ah, Waalidiinta sida wada jirka ah ilmaha mas’uulka uga ah, waxay si wada jir ah go’aan uga gaarayaan arimo faro badan. Arimahaas waxaa ka mid ah caruurtamagacooda
meesha ay dagayaan
isticmaalka hantida caruurta
Mas’uul ka wada ahaanshada caruurta waxaa shardi u ah inay waalidiintu si wada jir ah uga wada shaqayn karaan danaha caruurta sida ugu wanaag badan caruurta. Tusaale ahaan dalabka baasaboorka waa in loo helo ogolaanshada labada waalid.
Waalidka Kaligisa ah ayaa go’aan ka gaaraya arrimaha khuseeya caruurta. Masuuliyiinta dawlada, sida xanaanada caruurta, iskuulka waxay macluumaadka caruurta siinayaan kaligi daryeelaha caruurta oo kaliya. Si kastoo ay ahaataba waalidka kale ayaa go'aan ka gaaraya daryeelka iyo barbaarinta cunugga marka uu cunuggu isaga la deggan yahay.
Guurka iyo wada daganaanshdaba waalidiintu waa inay go’aan ka gaaran cidda ilmaha mas’uul ka noqonaysa, lacagta kaalmada nolosha caruurta, degaanka iyo xaq u yeelashada la kulanka caruurta. Wixii warar dheeraad ah ka akhriso bogga internetka InfoFinlandi Caruurta waalidiintoodu is-fureen.
Caruurta waxaa la soo adabtigarayn karaa kali. Soo korsashada ilmaha waxaa lagu qariraa sharciga soo korsashada.
Ururka qoysaska halka waalidka leh (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) wuxuu bixiyaa macluumaad isla markaasna wuxuu hawlo u qaban-qaabiyaa qoysaska halka waalid leh. Bogga Internetka ee Finlex ayaad ka akhrin kartaa sharciyada la xiriira daryeelka iyo xuquuqda la kulanka caruurta.
Ururka qoysaska yar yar waa urur qaran oo ay aasaaseen waalidiinta kaliggod caruurta haysta, kaas oo waxqabad u abaabula qoysaska xubnaha ka ah.
Sharciga daryeelka caruurta iyo xuquuqda la kulanka caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macluumaad loogu talogalay qoysaska halka waalid lehFinnish
Wax qabad loogu talogalay qoysaska yar yarFinnish | Ingiriis
Labada waalid waxay mas'uul ka yihiin masruufka cunugga kayar 18 sano, inkastoo aysan meel wada deganayn. Marka ay waalidku isfuraan waa inay ka heshiiyaan masruufka cunugga iyo kaalmada masruufka (elatusapu) ee suurtagalka ah.
Tirada kaalmada masruufka waxaa loo xisaabayaa si waafaqasan baahida masruuf cunugga iyo awoodda masruuf bixin ee waalidka. Baahida masruufka cunugga waxaa loola jeedaa tiro laca ah oo ku baxeysa nolosha cunugga bil kasta. Waxaa ku jira tusaale ahaan kharashka ku baxa cuntada, dharka iyo kharashka ku baxda xannaano-maalmeedka ee suurtagalka ah. Masruufka uu cunuggu u baahanyahay waxaa waalidka loogu qeybiyaa hab waafaqsan awoodooda. Awoodista bixinta masruufka waxaa loo xisaabayaa iyadoo laga jarayo dakhliga marka hore canshuuraha, iyo kharashaadka kale ee qasabka ah. Waxaad caawimaad dhinaca xisaabinta masruufka ah weydiisan kartaa ilaaliyaha danaha carruurta (lastenvalvoja) ee degmadaada.
Kaalmada masruufka waxaa haboon in laga sameeyo heshiis qoraal ah, kaas oo ay gudoonka soohaalku xaqiijiyaan. Heshiiska sidan oo kale loo xaqiijiyay wuxuu rasmi ahaan lamid yahay go’aan maxkamadeed. Ka codso xaqiijinta ilaaliyaha danaha carruurta ee degmadaada.
Haddii aysan waalidku ka heshiin kaalmada masruufka, waxay caawimaad ka heli karaan heshiisiinta arrimaha qoyska. Marka ugu dambeysa waxaa arrinta xal looga gaarayaa maxkamadda. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heshiisiinta arrimaha qoyska waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Furiin.
Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro waalidka cunuggu la deggan wuxuu Kelada ka codsan karaa kaalmada masruufka.
Kelada waxaad ka codsan kartaa kaalmada masruufka marka lagu jiro xaaladaha soo socda:
Xaq ayaad u leedahay in aad caawimaadda masruufka ka hesho waalidka kale, laakiin waalidka ayaan bixin lacagta.
Caawimaadda masruufka lama xoojin karo, sababtoo ah dakhliga waalidka kale ayaa yar.
Caawimaadda masruufka ee la xoojiyay ayaa ka yar taageerada masruufka, sababtoo ah dakhliga waalidka kale ayaa yar.
Cunug ayaad kaligaada soo qaadatay si aad u korsato.
Cunuggu wuxuu ku dhashay guur la’aan, aabaha lama xaqiijin cunugguna ma lahan labo waalid oo uu saaran yahay waajibka masruufkiisa.
Cunuggu wuxuu ku dhashay xiriir guur oo ka dhexeeyay hooyada lamaanaheeda dumarka ah, laakiin cunuggu ma lahan aabo la xaqiijiyay lamaanaha hooyaduna korsasho ahaan uma qaadan cunugga.
Waad heli kartaa kaalmada masruufka haddii aad Finland u deggan tahay si rasmi ah. Sidoo kale waad heli kartaa kaalmada masruufka haddii aad Finland shaqaale ahaan uga timid wadan kale oo Midowga Yurub ama wadan ETA ah iyo weliba Switzerland. Kaalmada masruufka waxaa xaq u leh cunug Finland si rasmi ah u deggan ama si ku meelgaar ah dibadda u jooga ugu badnaan muddo 6 bilood ah.
Macluumaad dheeraad ah ku saabsan taageerada masruufka waxaad ka heleysa Kelada.
Macluumaad ku socda waalidiinta ay ku waajibtay quudintaFinnish
Lacagta cawinaad nolosha iyo lacgta kaalamada ee la siiyo qofka kaligeed caruurta haysaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Furiinka Finland gudaheedaFinnish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan